सम्बन्धमा ताजगी ल्याउने के हो मेकअप सेक्स ? - Everest Dainik - News from Nepal
सम्बन्धमा ताजगी ल्याउने के हो मेकअप सेक्स ?
श्रीमान–श्रीमती या जोडीका बीच मनमुटाव हुनु स्वभाविकै हो । र, यो कुराको सोझो असर यौनजीवनमा परेको हुन्छ । कतिपय बेला दुबैका बीच बहस चलेको हुन्छ । यो बहस चलेको अवस्थालाई सेक्समा लगेर सम्बन्धमा नयाँपन दिने कुरा नै मेकअप सेक्स हो ।
यदि तपाईले यो तरिका अपनाउनु भएको छैन भने एकपल्ट यहाँ दिइएका टिप्सका आधारमा शुरु गर्नुहोस् । यसप्रकारको सेक्सको आनन्द सामान्य भन्दा फरक हुन्छ ।
मेकअप सेक्सले यौनसम्बन्धलाई थप चटपटे बनाउने वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
१. चिढाउनु ः कसैलाई चिढाउनु भन्दा ठूलो कुनै हतियार हुन्न । तपाईको पार्टनरलाई झगडाको बीचमा या झगडाको केही छिनपछि चिढाउन सुरुगर्नु छ । यस्तो काम गर्नुस् जो उनलाई सेक्सी लाग्छन् । तपाई उनलाई आँखा झिम्क्याउन सक्नुहुन्छ या विगतमा यौनसम्बन्धका बेला मजाक गरिएका कुनै कुराको अभिनय गर्न सक्नुहुन्छ । उनका कपडा खोल्न कोशीस गरेजस्तो गर्न सक्नहुन्छ । तपाईले रमाइलो पाराले चिढाउनु भयो भने यसले दुबैलाई शान्त बनाउने छ ।
२. तडफाउनेः यति गल्ती तपाईको छ भने नोक्सानी पनि तपाईको हुनुपर्यो नि, किनभने झगडा त तपाईले शुरु गर्नु भएको थियो । त्यसैले तपाईलाई रिस उठाउने या झगडा गर्ने पार्टनरले तपाईलाई मनाउने कोशीस गरे नमान्नुस, तपाई उसलाई पनि तडफाउनुस् । केही छिन उसलाई लागोस कि तपाई साँच्चिकै रिसाउनु भयो । यही मनाउने कुराबाटै जिस्किने कुरा सुरु हुन्छ र चिढाउने कुरा पनि ।
याे पनि पढ्नुस स्खलन ढिलो हुने उपाय के होला ?
३. मेक अप सेक्सको अर्को तरिका भनेको सेक्स गर्दा रिस उठेजस्तो गरेर जोड जोडले किस गर्नु पनि हो । रिसपूर्वक मायाले सेक्समा एग्रेसन या आक्रामकता ल्याउँछ । यसले सामान्य अवस्थामा हुने सेक्स भन्दा फरक आनन्द दिन्छ । अलि पिटेजस्तो गर्ने, अलि चिथोरेजस्तो गर्ने गर्दा पनि झन आनन्द आउँछ ।
४. यसका साथै एक अर्कासँग झगडा गर्दै नजिक ल्याउने पनि अर्को तरिका हो । तपाईहरु हत्केला लडाएर या सिरानीले हिर्काउने खेल खेलेर नजिक आउन सक्नुहुन्छ ।
५. यी सबै तरिकाहरु आफु अनुसार फरक हुन सक्छन् । मुख्य कुरा तपाई दुई मध्ये एकजनाले अवस्थालाई मेक अप गर्ने हो । अर्थात् बिग्रेको कुरालाई सपार्न पार्टनरलाई त्यो स्टेजसम्म पुर्याउने हो ।
जसरी मेकअम गरेपछि मानिस फरक देखिन्छ, मेकअप सेक्समा पनि शुरुमा सबै बनावटी हुन्छ । यसले सेक्सको सिचुएसन बनाउँछ । अनि सेक्स शुरु भएपछि यसको आनन्द बेग्लै हुन्छ ।